Barnaamijka Bartayaasha Ingiriisida - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Barnaamijka Bartayaasha Ingiriisiga (EL) wuxuu taageeraa bartayaasha luuqadaha badan ku hadla sidii ay u heli lahaayeen Ingiriisiga ay u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan fasalka iyo wixii ka dambeeya, iyadoo la raacayo Xeerarka Gobolka Minnesota iyo Heerarka Aqoonta Luqadda Ingiriisiga. Ardayda soo socota waxa lagu imtixaamaa aqoonta Ingiriisiga markay galayaan dugsiyada Degmooyinka 196, iyo sidoo kale xilliyo sanad dugsiyeed ah si loo go'aamiyo horumarka iyo u-qalmitaanka barashada sii socota.
Goobaha EL, bartayaasha Ingiriisiga waxay qayb ka yihiin waayo-aragnimada barashada Luqadda Ingiriisiga halkaas oo ardaydu ay ka qaybgalaan barashada maadada iyo barashada Ingiriisiga isku mar. Ardayda waxaa lagu qoondeeyay heerka aqoonta heer dugsi hoose ilaa heer dugsi sare waana laga yaabaa ama lagama yaabo in ay wadaagaan isla luuqadda hooyo.
Aqoonsiga Barashada Ingiriisiga
Nidaamka Galitaanka iyo Bixitaanka
Minnesota, bartaha Ingiriisiga (EL) waxaa lagu qeexaa inuu yahay barte buuxiya shuruudaha soo socda:
Ardayga, sida uu caddeeyay waalid ama ilaaliye wuxuu adeegsadaa luqad aan Ingiriisiga ahayn; iyo
Ardayga waxaa lagu go'aamiyaa qiimeyn sax ah oo lagu cabiro ardayga aqoontiisa luqadda Ingiriisiga iyo tallaabooyin horumarineed oo habboon, oo ay ku jiri karaan indha indheyn, go'aan macallin, talo soo jeedin waalid, ama qalab qiimeyn horumarineed ku habboon, si loo waayo xirfadaha Ingiriisiga ee lagama maarmaanka u ah inay si buuxda uga qaybgalaan fasallada tacliinta oo af-ingiriisi ah.
Ardayda luuqadaha badan ku hadasha waxaa marka hore aqoonsaday Daraasadda Luqadda ee Minnesota (MNLS). Dhammaan waalidiinta iyo dadka ardayda masuulka ka ah ee ka diiwaangashan arday cusub degmada waa in la siiyaa MNLS. Marka luuqad aan Ingiriisiga ahayn la aqoonsado shaqaalaha degmadu waxay go'aamiyaan haddii ardaygu horeyba loogu qoondeeyey inuu yahay Barte Ingiriisi ama ardayga loo qiimeyn doono aqoontooda Luqadda Ingiriisiga iyadoo la adeegsanayo qiimeynta loo baahan yahay si loo ogaado haddii bartaha uu u-qalmo adeegga bartaha Ingiriisiga.
Bartayaasha Ingiriisiga waxay ka kala yimaadeen asallo kala duwan. Bartayaasha Ingiriisiga waxaa ka mid noqon kara:
Ardayda ku dhasha Mareykanka kuna hadla luqad marka lagu daro Ingiriisiga guriga;
Ardayda ku dhasha Mareykanka kuna hadla luqad aan aheyn Ingiriisiga guriga;
Ardayda soo galootiga ah ee ku soo qaatay waxbarashadii rasmiga ahayd luqad kale;
Ardayda soo galootiga ah ee hakad galiyay ama xaddiday waxbarashadii rasmiga ahayd, iyo/ama
Ardayda Qaxootiga ah ee soo bartay luqad aan ahayn ama lagu daro Ingiriisiga.
Waxyaabaha soo socda ayaa liis garaya shuruudaha loo adeegsado go'aaminta u-qalmitaanka ardayga ee Barnaamijka bartaha Ingiriisiga (EL). Sida lagu qeexay Gobolka Minnesota, ardayda loo aqoonsaday inay yihiin bartayaasha Ingiriisiga waa inay lahaadaan luuqad guri oo aan aheyn Ingiriis isla markaana lagu go'aamiyaa tilaabooyin ku habboon koritaan ahaan si loo waayo xirfadaha Ingiriisiga ee lagama maarmaanka u ah inay si buuxda uga qayb galaan fasallada tacliimeed ee lagu dhigo Ingiriisiga.
Tallaabada 1: Aqoonsiga luqadaha aasaasiga ah iyadoo la adeegsanayo jawaabaha waalidka ee Xog-ururinta Luqadda Minnesota (MNLS)
Tallaabada 2: Baadhitaanka awooda luuqada Ingiriisiga iyadoo la adeegsanayo qiimeynta aqoonta luuqada ee gobolka uu ogolaaday.
Tallaabada 3: Ogeysiinta Waalidka - Waalidiinta waxaa lagu wargelinayaa labada toddobaad ee ugu horreysa ee diiwaangelinta in ilmahoodu uqalmo adeegyada EL iyadoo la adeegsanayo Foomka Ogeysiinta Waalidka ee Degmada. Ogaysiinta waxaa ku jira waqtiga iyo nooca adeegga EL ee canugga la siinayo. Warqaddu waxay ku wargelinaysaa waalidiinta xaqa ay u leeyihiin inay diidaan adeegga.
Tallaabada 4: Ardaygu wuxuu ka diiwaangashan yahay Barnaamijka Waxbarista Barashada Luuqada wuxuuna wax ka baraa macallin ESL oo shati haysta. Dhammaan ardayda loo aqoonsaday inay yihiin bartayaasha Ingiriisiga waxay kaqeybqaataan sannad kasta qiimeynta aqoonta Ingiriisiga ee ACCESS.
Tallaabada 5: Ka bixida iyo dib-u-Qoondeynta - Ardayga waa laga baxay adeegga EL oo dib ayaa loo qoondeeyay markii ardaygu buuxiyo shuruudaha aqoonta ee Minnesota ee qiimeynta ACCESS.
ILMAHAYGU HALKAN AYUU KU DHASHAY. WELI MA KA HELI KARAA CAAWIMADA MACALINKA EL?
Haa 85% dhamaan ardayda pre-K ilaa fasalka 5aad ee leh heerka EL iyo 62% ardayda dhigata fasalada 6-12th ee leh heerka EL waxay ku dhasheen Maraykanka.
Ardaygu wuu heli karaa adeegyada EL haddii ardaygu ku dhashay Maraykanka oo uu marka hore bartay luuqad aan ahayn Ingiriis iyo / ama ka yimid guri inta badan looga hadlo luqad aan Ingiriisiga ahayn. Ardaygu waa inuu uqalmaa adeegyada EL iyadoo lagu saleynayo qiimeynta luuqada degmada.
ILMAHAYGU WAXA UU UGU HADLAA INGIRIISIDA SI FIICAN. WAA MAXAY SABABTA UU U HELAYO ADEEGA EL?
Cunugaada waxaa laga yaabaa inuu soo bandhigayo aqoon sare oo Ingiriisiga ah. Arday aad u karti badan ayaa badiyaa soo bandhiga luuqad adag oo afka ah iyo luqad adag oo bulsheed iyadoo weli ay ubaahan yihiin taageero dhanka aqrinta iyo qorida luqada tacliinta ah.
MIYAAN DIIDI KARAA TAAGEERADA EL EE ILMAHAYGA?
Haa Waxaad xaq u leedahay inaad diido adeegga EL. Diidmada adeegga waxay u baahan tahay in la sameeyo sanad walba, sidaa darteed waalidku waxay heli karaan xogta ugu badan ee hadda jirta ee ku saabsan waxbarashada ilmahooda waxayna sameyn karaan go'aanno xog-ogaal ah oo ku saabsan adeegga EL.
SIDEE AYAY ARDAYGA KAGA BAXAA BARNAAMIJKA EL?
Fadlan eeg tabka “Gelitaanka iyo bixitaanka”
DEGMADU MA WEYDIIN KARTAA XAALADDA SOGALOOTIGA EE ARDAYGA?
Maya Sanadkii 1982, Maraykanka Maxkamadda Sare ayaa xukuntay Plyler v. Doe [457 U.S. 202 (1982)] in ardayda aan sharciyeysnayn ay xaq u leeyihiin inay dhigtaan iskuulka dadweynaha si la mid ah muwaadiniinta Mareykanka iyo deganayaasha joogtada ah. Natiijo ahaan, iskuulada dowliga ah lagama yaabo inay ku dhaqmaan waxqabad kasta oo "qaboojiya" ama hor istaagaya xuquuqda ama helitaanka iskuulka. Tan waxaa ka mid ah in looga baahan yahay ardayda ama waalidiinta inay sheegaan ama diiwaangeliyaan xaaladdooda socdaal.